Isazi Semalt Sichaza Indlela Yokuthola Futhi Amakhasi Aqondile Ngokuqukethwe Okuphindaphindiwe
Okuqukethwe okuphindaphindiwe kuyinkinga enkulu uma kuziwa ekusezingeni ezinjini zokusesha. SEOkuyinkambinkimbi enzima, ehlanganisa imisebenzi efana nokukhangisa kokuqukethwe, ukwakha isixhumanisi nokukhangisa kwezokuxhumana nabantu. Nokho, ukulungisa impindaokuqukethwe kungaba nzima - klavier umzug winterthur. Izici eziyinhloko zale nqubo yilokhu:
Kudinga izinguquko ezincane kuphela zobuchwepheshe
Izigaba ziqala ukuthuthukisa ngokushesha uma umuntu elungisa
I-Google crawler ifunda izinguquko kusayithi lakho ngokushesha kakhulu
Uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi Wezindiza, Igor Gamanenko uchaza ukuthi angasebenza kanjani ngokuqukethwe ngokuphindaphindiwe ngendlela efanele.
Ukuthi okuqukethwe okuphindiwe kuncibilikisa igunya
Ngokusho kwebhulogi yewebhu ye-google, idumela lokuqukethwe kwakho kwewebhu noma okuthunyelwe kwebhulogiihlanjululwa uma ifinyeleleka kusuka kuma-URL amaningi. Ngokweqile, lokhu kungenza amakhasi ahlukene ahluke ngokuqukethwe okufanayo, ngakho-ke lokho kunciphisaukubonakala kwakho kwe-SERP kwamanye amagama angukhiye athile. Ukuthola kabusha igunya kulula kakhulu uma sisebenzisa izixhumanisi ngekhasi le-canonical.
Omunye kufanele ahlanganise izixhumanisi nge-301 elula eqondisa kabusha okuqukethwe kokuqukethwe kwewebhuukuze zonke izixhumanisi zikhomba ekhasini elijwayelekile lokufika. Ngenxa yalokho, igunya kanye nomgwaqo wekhasi ukwanda ngesilinganiso esifanayo,okuholela kulokho i-Google efuna ukuyibeka khona.
Ukuthola okuqukethwe okuphindwe kabili
Ukukwazi ukuthi unenkinga yokuqukethwe okuphindaphindiwe kulula. Vele uye kuinjini yakho yokusesha oyintandokazi efana ne-Google (noma leyo oyilungiselela), bese uthayipha kusayithi: yoursitename.com. Lapho amakhasi amaningana ekhomba kuokuqukethwe okufanayo kufakwe ohlwini, uye waba nezixhumanisi eziphindaphindiwe. Lokhu kwenzeka ukuthi lelo khasi elithile, noma umkhiqizo, lithola amathuba amaningiku-Google bots..
Indlela ejwayelekile kakhulu yokuthola okuqukethwe okuphindwe kabili ithola inombolo yezintonoma amakhasi anikezwe yi-Google. Ikhasi elinamathegi we-canonical lingabangela i-dilution. Ubufakazi bokuthi lokhu kungase kubekwe phezulu kwezinyeimikhiqizo okwamanje iphansi kulowo, engabhaliswa yi-Google.
Kwezinye izimo, i-Google ingase ikhiqize imiphumela yokusesha yemikhiqizo ngaphezu kwakhokuwebhusayithi yakho. Uma inani lemiphumela yosesho lidlula inani lamakhasi akho ewebhu, kunethuba lokuthi unezixhumanisi eziphindaphindiwe.Uma wenza izinguquko kusayithi lakho, kungathatha amasonto ukuvuselela wonke amakhasi akho angaba ngaphezulu kuka-800,000. Lo mphumela uchaza ukuthi kungani aIphutha le-404 lingabingelela abasebenzisi ngokuchofoza eminye yemikhiqizo nama-URL amadala.
Indlela yokulungisa okuqukethwe okuphindwe kabili
Ekuqaleni, ukuvimbela abakwa-Google crawlers abasebenzisa ifayela elula ye-robots.txt yiyona engcono kakhuluindlela yokubhekana nalesi simo. Noma kunjalo, leli qhinga lihluleka ukwandisa igunya kanye nedumela kumakhasi e-canonical. Izixhumanisi zikhonanaphezu kwakho ugweme izinhlawulo. Noma kunjalo, ukusebenza kwakho kwe-SEO akuthuthuki.
301 ukuqondisa kabusha e-Apache kuyindlela engcono kakhulu yokuqondisa kabusha amathebhu we-canonical unomphela.Ukubuyiselwa kuyasebenza kakhulu kunamathebhu we-canonical. Ukuqedwa kwezigaba kokuqukethwe kwakho kwewebhu kusiza ekusungulweni kokuqondisa okukodwa,okuyinto isisombululo esithembekile, esingunaphakade. Isibonelo, esikhundleni sokwakha isayithi.com/category1/product1, sebenzisa isayithi.com/product1 kuphela.
Ngokuvamile, ukukhohlisa okuyinhloko ngemuva kokuhlanganisa okuqukethwe okuphindwe kabili kuhambisana nama-backlink.Uma ama-backlink akhomba ikhasi elinokuqukethwe okuphindwe kabili, athambekele ekunciphiseni isikhundla sakho futhi ashintshe kabi ukuguqulwa kwakho.Ukubaluleka kanye negunya lokuqukethwe okuphindwe kabili kuvame ukuba phansi. Ngakho-ke, amasu achazwe ngenhla kufanele asetshenziswe ukuze agwemeIzinhlawulo ze-Google algorithm.